News - Lithium Drill 12V နှင့် 16.8V အကြားကွာခြားချက်
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တွင်းတူးရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်အိမ်၌ screw မ်ားတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ power drills ကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။ ပါဝါလေ့ကျင့်မှုများအကြားခြားနားချက်များလည်းရှိပါတယ်။ ဘုံများမှာ ၁၂ volt နှင့် 16.8 Volts တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအခါနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
12V နှင့် 16.8V power drills အကြားခြားနားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
၁. လက်နှင့်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများအကြားတွင်အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်မှာ voltage ဖြစ်သည်။ voltage တစ်ခုသည် voltage ၁၂ Volts ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုမှာ 16.8 Volts ဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အထုပ်တွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသော display ရှိလိမ့်မည်။
2.The မြန်နှုန်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ကွဲပြားသော voltages များအောက်တွင် run သောအခါ၎င်းသည်ကွဲပြားသောအမြန်နှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ၁၆.၈ ဗို့လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်အတော်လေးကြီးမားသောမြန်နှုန်းရှိလိမ့်မည်။
3.The ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မတူညီသော voltages များကြောင့်သင်သည်မတူညီသော motor များကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်မတူညီသောအီလက်ထရောနစ်စွမ်းရည်ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဗို့အားမြင့်လေလေအီလက်ထရွန်နစ်စွမ်းရည်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။
Electric Drills ၏ခွဲခြား
၁။ ရည်ရွယ်ချက်အလိုက်ခွဲခြားထားသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထောက်ပံ့သည့်ဝက်အူများရှိသည်။ လျှပ်စစ်တူးခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သတ္တုပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်၊ အချို့သည်သစ်သားပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
2. ဘက်ထရီ၏ဗို့အားအတိုင်းအတာအရပိုမိုအသုံးပြုသည်မှာ ၁၂ Volts ဖြစ်ပြီး ၁၆.၈ ဗို့နှင့် ၂၁ volt ရှိသည်။
၃။ ဘက်ထရီခွဲခြားမှုအရ lithium battery နှင့်အခြားတစ်ခုမှာနီကယ်ခရိုမီယမ်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ယခင်ကပိုလူကြိုက်များပြီးပိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးအရှုံးလည်းနည်းသောကြောင့်နီကယ်ခရိုမီယမ်ဘက်ထရီကိုရွေးချယ်ပါကလျှပ်စစ်လက်ကိုင်လေ့ကျင့်ခန်း၏စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုစျေးကြီးလိမ့်မည်။